Tahriibayaal Somali oo lagu xiray Xuduudka Sacuudiga iyo Yemen – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Tahriibayaal Somali oo lagu xiray Xuduudka Sacuudiga iyo Yemen
By Reporter	 On Mar 20, 2017
Wargeyska Asharqal-awsad ayaa qoray inay Ciiddanka Ilaaladda Xuduudaha Sacuudiga qabteen Tahriibayaal Ajaaniib ah oo ay Somali ku jireen, kuwaasi oo doonayey inay ka soo gudbaan xuduudka Sacuudiga la wadaagaan Yemen.
Afhayeenka Amniga ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Sacuudiga, Jeneral Mansuur Al-turki ayaa sheegay inay Ilaaladda Xuduudaha qabteen Tahriibayaal tiradoodu dhan tahay 1,265 qof, kuwaasi oo doonayey inay sharci la’aan kaga so ogudbaan Degmadda Al-dayer Bani Malik ee Gobalka Jazan ee dalka Sacuudiga.
Bayaan uu Afhayeenku soo saaray ayuu ku sheegay in tahriibayaasha la qabtay kala ahaayeen 847 qof oo u dhalatay Yedmen, 309 oo u dhalatay Ethiopia iyo 16 Somali ah.
Dhinaca kale, waxa uu sheegay inay Ciiddanka toogteen 3 qof oo waxyaabaha qarxa ka soo gudbin lahaa Sacuudiga la wadaagaan Yemen.
Hawlgalkaasi waxaa lagu dhaawacy 2-kale, halka 30-kalena is-dhiibeen, lamana sheegin dalalka ay u dhasheen.
Dhinaca kale, Isbahaysiga Milliteri ee Sacuudiga ayaan wax war ah ka soo saarin Duqeyntii lagu dilay ugu yaraan 42 Qaxooti Somali oo la socotay dooni ku sii jeeday Xeebaha dalka Sudan.
Taas bedelkeeda, waxay Isbahaysiga ka codsadeen QM inay la wareegaan Maamulka Dekedda Xudeydah ee Galbeedka Yemen, halkaasi oo ay Maleeshiyadda Xuutiyiinta maamulaan.
Hay’adda UNHCR ayaa sheegtay inaan la aqbali karin weerarka lagu dilay Qaxootiga Soomaalida ee doonida kaga soo shiraacday Dekedda Xudeydah, kuna sii jeeday Xeebaha Sudan.
Qaxooti ka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay inay Diyaarad Helikoptar ah rasaas ku furtay doonida ay la socdeen Qaxootiga, iyadoo Diyaaradaasi la tuhunsan yahay inay leeyihiin Isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka kula jira Maleeshiyadda Xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto.
Codsi ay Puntland u gudbisay Isbahaysiga NATO oo lagu gacan-sayray.